Ozi enyere na Medjugorje na Machị 2, 2016 | Ahụrụ m Jizọs n'anya
Ozi enyere Medjugorje na Machị 2, 2016
di Paolo Tescione - Machị 2, 2016
“Dearmụ m, mbata m n’etiti unu bụ onyinye nke Nna bi n’eluigwe nyere unu. Site n’ịhụnanya ya ka m bịara inyere gị aka ịchọta ụzọ nke eziokwu, ị chọta ụzọ nke Ọkpara m. Abia m ikwenye na Eziokwu. Achọrọ m ichetara unu okwu nke Ọkpara m.
O kwuru okwu nzọpụta maka mmadụ niile, maka ụwa niile. Okwu ịhụnanya maka onye ọ bụla. Hụnanya o gosiri anyị site n'ịchụ àjà ya. Ma ọbụna taa, ọtụtụ ụmụ m amaghị ya, ha achọghịkwa ịmara ya. Ha enweghị mmasị. N'ihi enweghị mmetụ ha na-egbu m mgbu. Ọkpara m anọwo na Nna ahụ mgbe niile, ya na ọmụmụ ya o wetara anyị chi Chukwu mana akụkụ mmadụ natara ya n'aka m.
Ya na Okwu ahu biara, ya na ya ka oriọna nke uwa biara
nke na-abata n'obi ma mee ka ha ghọta ma mee ka ha nwee ịhụnanya nke nkasi obi.
Mymụ m, Ọkpara m nwere ike ịhụta ndị nile hụrụ ya n’anya n’ihi na a na-ahụ ihu ya na mkpụrụ obi ndị jupụtara n’ịhụnanya ya. Ya mere, ụmụ m, ndị ozi m, geenụ m ntị: hapụ ihe efu, ịchọ ọdịmma onwe onye nanị, ebila maka ihe ụwa, maka ihe onwunwe. Hụ Ọkpara m n'anya ma mee ka ndị ọzọ hụ ihu ya n'ịhụnanya ị hụrụ ya, m ga - enyere gị aka ịmata ya, m ga - agwakwa gị banyere ya ".